Bassistes Gasy : hampivondrona ireo mpitendry gitara beso ny fikambanana | NewsMada
Tetikasa efa elaela ny fampivondronana ireo mpitendry gitara beso eto Madagasikara. Nisy ny fifanentanana teo amin’ireo samy mpitendry gitara beso, matihanina na vao misondrotra. Teraka tamin’izany fa hatao ho fikambanana ara-dalàna izy ity, ho fifanohanan’ireo samy mpitendry. “Hiantsoana indrindra an’ireo tsy matihanina, vao misondrotra sy mankafy ny gitara beso izy ity. Tetikasa hifanampiana no tena hatao ao”, hoy ny fanazavan’i Mika, izay mpandrindra ny fikambanana aloha, hatreto.
Araka izany, fantatra fa hisy ny atrikasa fiofanana, ho an’ireo mpikambana ny 5 marsa izao, eny amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano, manomboka amin’ny 10 ora maraina. Fandraisana ireo mpikambana vaovao ihany koa io. Horaisina an-tsary ny fotoana, hampahafantarana ireo mpiara-miasa any ivelany ny zavatra hataon’ny fikambanana.
Araka ny fanazavan’i Mika hatrany, natao mba tsy hisian’ny fizarazarana eo amin’ny samy mpitendry gitara beso ny fikambanana. Hivelatra any amin’ny faritany izany, satria anisan’ny tanjona ny fifanakalozana. Ezahana ny hisian’ny atrikasa indray isam-bolana ho an’ny Bassistes Gasy.